वान डे सिरिजः पहिलो खेलमा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः पहिलो खेलमा को–कोले पाए मौका?
यसअघि, भारतसँगको २ टी–२० सिरिज जितेकाले वान डेमा पनि अष्ट्रेलियाले आफ्नो शानदार प्रदर्शन कायम राख्न चाहन्छ । यस्तै, भारत टी–२० मा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो १ः४५ बजेदेखि शुरु हुँदैछ । पहिलो खेलमा कोकोले पाए मौका ? हेर्नुस् दुबै टिममा अन्तिम–११